Izindaba - Ezinye izitayela zesudi zabesilisa ngo-2021
Akunandaba ukuthi zingaki izazi zezingubo zabesilisa ezifundile umcimbi wokugcina wale suti ngemuva kobhadane, abesilisa babonakala benesidingo esivuselelwe salezi zingxenye ezimbili. Kodwa-ke, njengezinto eziningi, isudi yasehlobo iyashintshwa ngokuhlukaniswa, ukwakheka kwe-seersucker, futhi ekugcineni ufunde ukuthanda amafolda welineni, futhi uma ungabaza, ungagqoka nezicathulo ezithambile.
Ngiyawathanda amasudi, kepha ngiwagqoka ngoba ayangijabulisa, hhayi ngoba umsebenzi wami ungiphoqa ukuba ngenze njalo, ngakho ngiwagqoka ngendlela engajwayelekile. Kulezi zinsuku, kunzima ukucabanga ukuthi miningi kakhulu imisebenzi yokugqoka isudi: Abashayeli bakwaMercedes S-Class nabakwaBMW 7 Series, onogada ababizayo abanezintambo ezigoqekile kuziphika zabo, abarrister, ababuza ngemisebenzi, kanjalo nabezombusazwe. Ikakhulukazi Abezombusazwe babegqoka amasudi futhi benza nemidanso ethukile, njengoba kubonwa ku-G7; inhloso bekubonakala njengokufeza ifomu eliyisidina ngenjabulo encane yobuhle.
Kepha kulabo bethu abangawavuli ama-oligarchs noma ababambe iqhaza kwizithangami zohulumeni, isudi yasehlobo iyithuba lokukhululeka futhi sizivumele sibuyele ngobumnene esimweni esijwayelekile. Kufanele sicabangele esikugqokayo emicimbini yasengadini, imidlalo yaseshashalazini evulekile, imihlangano yokuncintisana, imincintiswano yethenisi, kanye nezidlo zasemini zangaphandle (ithiphu elula: uma behlinzeka ngokuthile okuphezulu kakhulu kunama-burger nobhiya welebula wangasese, sicela uyeke umbala osimende i-tooling Shorts… cabanga ngakho, vele ulahle kude).
Izenzo zamadoda aseBrithani ehlobo elaziwayo elingenazwela kwesinye isikhathi zibonakala zikanambambili, kepha kunendlela okufanele idwetshwe phakathi kweCharybdis ngezikhindi zemithwalo kanye noScylla ngamasudi ehlobo, okuhola amadoda avela eDel Monte naseSandhill. Impumelelo imvamisa ilele ekwenzeni izinqumo ezilungile zendwangu.
Eminyakeni embalwa eyedlule, i-seersucker isuse imfundiso emincane yemivimbo yayo eluhlaza okwesibhakabhaka noma ebomvu futhi yavela kuphungumpa njengovemvane olumbala. ”Ngenze amasudi ama-seersucker amaningi eWimbledon naseGoodwood kulo nyaka kuneminyaka eyishumi edlule. Kwenzeka kabusha kabusha, kuya ngombala, ”kusho uTerry Haste waseKent & Haste, ku-Savile Street, njengamanje I-seersucker enemibala eminingi imkhombisa uKen Kesey enhliziyweni yakhe. ”Kunemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka negolide, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokunsundu, kanye nemivimbo yegridi neyesikwele.”
Omunye wabaholi be-seersucker eqanjiwe uCacciopoli, umphakeli wendwangu eNaples, kepha i-seersucker ayinikezi umbala kuphela, kodwa futhi iqeda nokukhathazeka ngama-creases: ama-creases ayiphuzu; empeleni, ingaphambi kokugcotshwa, i-pre-relaxed Yebo, ilungele ukusetshenziswa kwehlobo.
UMichael Hill kaDrake uthe yilomuzwa ongenekayo ongenxa yesizathu sokuthandwa kwelineni kulo nyaka. ”Okushaye kakhulu isudi yethu yelineni. Akukho okuguqukayo ngemibala ewinayo: imikhumbi yempi yasolwandle, i-khaki, i-hazel nogwayi. ” Kodwa umehluko ukuthi ubhekise kulokho akubize Kuma-costume "e-suit suit", wahlukanisa nophambi komthungi osemthethweni.
“Kumayelana nokwamukela i-crease. Awufuni ukuba yigugu kakhulu, futhi iqiniso lokuthi ungaliphonsa emshinini wokuwasha kusiza ukwenza ukuthi isudi lingeneke kalula. Amadoda afuna ukugqoka ngendlela ehlukile futhi asike nge-polo shirt noma isikibha ukuze aphule amaJakhethi namabhulukwe. Kuleli hlobo, sibona izitayela zokugqoka ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezihlanganisa ukugqoka okusemthethweni nokugqoka okungahlelekile, izigqoko ezinhle ezindala ze-baseball namabhodlela athambile e-canvas anamasudi. Ithole kahle, i-dynamite. ”
Ingxenye yesizathu sokucabanga kabusha ngesudi ukuthi uDrake akathengisi isudi yomdlalo njengesudi, kepha njengehlukaniswa elingagqokwa njengesudi. Le psychology ebonakala iphikisana, ithengisa isembatho sasehlobo njengezingcezu ezimbili ezifanayo, nayo ibamba iqhaza kuConnolly. Ihlinzeka ngohlobo olumelana nezinyembezi, oluchazwa umphathi weConnolly u-Isabel Ettedgui njenge- "seersucker yezobuchwepheshe."
"Sizithengisa njengamabhantshi namabhulukwe okhalayo," kusho u-Ettedgui. ”Amadoda afana nalokhu ngoba ecabanga ukuthi angawathenga ngokwahlukana, noma engafuni. Sikudayisele izingane ezineminyaka engama-23 nezineminyaka engama-73 ubudala abathanda imibala evamile futhi abangawafaki amasokisi. ”
UZegna unendaba efanayo. Umqondisi wezobuciko u-Alessandro Sartori uchaze amasudi amadala asemthethweni njengadumile kumakhasimende enziwe ngokwezifiso nangamakhasimende, “Bagqoka amasudi ukuze bazithokozise.” . Ukulungela ukugqoka kungenye indaba. "Bathenga izinto ngazinye kumklami wezingubo osezingeni eliphezulu, bakhethe phezulu noma umsebenzi wasekhaya, benze nesudi ehambelana phezulu nangaphansi," kusho yena. Indwangu yenziwe ngosilika osontekile ne-cashmere, kanti inhlanganisela yelineni, ukotini nelineni isebenzisa ama-pastels amasha.
Umsiki wengqephu odumile waseNeapolitan uRubinacci naye uphendukele ngokusobala ebuhleni obungejwayelekile. "ISafari Park iyona ewinile kuleli hlobo ngoba ithokomele futhi kulula," kusho uMariano Rubinacci. "Kuyazipholela ngoba kufana nehembe elingenalayini, kodwa lifakwa njengejakhethi, ngakho-ke lingaba sesimeni esifanele, futhi wonke amaphakethe alo ayasebenza."
Ngikhuluma ngezingubo zokuvuna, nginomona kakhulu ngejakhethi kaMadras ukotini indodana yami encane eyathengwa emakethe yasePortobello: ingubo enamandla kaProust evusa isithombe seMelika enkathini ye-Eisenhower. Uma isheke liqina, kungcono. .. Kodwa ngamabhulukwe angenalutho.
Ngisho noHuntsman wenqaba enkulu yaseSavile Street useqaphele umkhuba ocacile wokwehlukana. UMqondisi wezobuCiko uCampbell Carey uthe: "Ngaphambi kukaCovid, abantu babezimisele kakhulu ukugqoka amajakhethi amasudi namabhulukwe amahle uma beya emihlanganweni." “Kuleli hlobo, asikwazi ukuthengisa amajakethi wesudi evulekile evulekile evulekile evulekile. Isakhiwo esilukiwe sisho ukuthi zingasonteka. Iza ngezinhlobonhlobo zemibala nemibala ukuze ikwenze uhambisane kakhulu nokuxuba kwakho, futhi ungakususa ukuze ungene futhi uphume umoya. ” UCarey uphinde wanikela ngalokho akubiza ngokuthi "ukusikeka ngempelasonto." Kusesithombeni sikaHuntsman; izingalo eziphakeme, inkinobho, okhalweni, “kodwa ulayini wamahlombe uthambile kancane, sayithambisa isakhiwo sendwangu, futhi isakhiwo sangaphambili sinye, sithatha indawo yezinwele [ezinzima] zehhashi.”
Uma ukhuluma ngamahembe, umqondo ukukwenza ubukeke sengathi ugqoke ihembe elinentamo evulekile, kunokuba uvele nje emngcwabeni we-mafia washesha waqaqa uthayi wakho waqaqa izinkinobho zekhola lehembe lakho. Isiphakamiso sami ukugqoka ihembe elinenkinobho yelineni elisezingeni eliphansi njengeBel yaseBarcelona. Ukwakhiwa kwayo akunayo i-neckband ne-top button, kepha isiphetho sangaphakathi sibukeka sihlakaniphile, futhi ukhololo ulokhu ugingqika ngenxa yezinkinobho ezisendaweni yekhololo.
Ukusuka lapho, ungaqhubeka ukhethe izikibha zeholide ezivulekile, ikhola luhlobo lwehembe elinekhola likaLido elishunyayelwe ngumklami wezingubo zabesilisa uScott Fraser Simpson. Uma ungumuntu othanda izinto ezintsha, hlola i-akhawunti ye-Instagram ka-Wei Koh, umsunguli weRake Tailored. Uchithe isikhathi esithile eboshiwe eSingapore, efanisa inqwaba yamasudi akhe namahembe aseHawaii futhi edubula imiphumela.
Umkhosi uzobuyela mathupha ohlwini lwethu lwezipikha nezindikimba eKenwood House (naku-inthanethi) ngoSepthemba 4. Ukujova konke lokhu kuzoba ukuvusa umoya kanye nethuba lokucabanga kabusha umhlaba ngemuva kobhadane. Ukubhuka amathikithi, sicela uvakashele lapha
Kepha ngisho nasesimweni sezulu sanamuhla sokukhululeka, kusenezikhathi lapho amahembe aseHawaii engathathwa njenge-trop futhi abantu bangakuthola kukhululeke (noma kugqame kancane) ukugqoka uthayi; ngalokhu, othayi ababoshiwe bayisinqumo esihle. Ungumlingani ohamba phambili omuhle kakhulu, ngoba lapho isontekile yaba yibhola yafakwa ekhoneni lepotimende, ngeke ishwabane noma ikhubazeke. Yize kuzwakala kungqubuzana, kubukeka kukhululeke kakhulu - uma ungangikholwa, ngicela isithombe sikaGoogle David Hockney nothayi oboshwe, angakusebenzisa ngamabhulukwe anombala opende futhi agoqe imikhono.
Kuzoba mnandi ukubona ukuthi noma izibopho eziboshwe zingasinda yini ezibikezelweni zikaHuntsman's Carey. Lokhu kwehlukaniswa kusesekude phambili. Uma leli hlobo limayelana ne-blazer mesh esheshayo, manje ubhekisa enye ingxenye yesudi enezingcezu ezimbili, futhi ephefumulelwe uhla lwezinketho ze-seersucker, usebenza kulokho akubiza ngochungechunge "lwezimfashini ezifashisayo". “Bangonyaka ozayo. "Yebo," esho, "kodwa ungalenzi iphutha, ibhantshi lesudi nesikhindi kulapha."
Isikhathi Iposi: Sep-13-2021